प्रदेश २ को नामाङ्कन : पहिचान मेटाउने अस्त्र 'मधेश' !
संघीयताको मूल मन्त्र विकेन्द्रीकरण हो तर दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले नेपालभित्र यस विषयले गाम्भीर्यता र आकर्षण पाएको देखिँदैन । देशभित्र संघीय संरचना स्थापित गराउन प्रदेश नम्बर २ को महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छ । पहिचान र अस्तित्वको लडाईंले प्रदेशभित्र एक नयाँ रूप लिने पूर्व संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।
एकातर्फ संघीयता बचाउन र यसको सफलतासँगै भविष्य सुनिश्चित गर्न प्रदेश नम्बर २ को भूमिकाको महत्त्व धेरै छ भने अर्कातर्फ राजनीतिक दलहरूले यस जगलाई बलियो बनाउन विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बेला पहिचान र अधिकारको लडाईंतर्फ आम सर्वसाधारणलाई धकेलेको देख्दा राजनीतिक संकट आउने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ ।
प्रदेशभित्र नामाङ्कन र राजधानीको विषयले यस सन्दर्भलाई सम्वेदनशील बनाउँदै गएको देखिन थालेको छ । हालै प्रदेशको स्थायी राजधानी जनकपुरधाममा प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेबारे प्रदेश सभाभित्र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो छुट्टाछुट्टै मत राख्न पुगे । नामाङ्कनको विषयले विवाद स्थापित गरेर प्रदेशभित्र एक नयाँ राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्‍यो ।
प्रदेशको नामाङ्कनले मुख्यतया केही गम्भीर प्रश्नहरूको उत्तर खोजेको देखिन्छ र यसले राजनीतिक चरित्र र धरातलबारे पनि स्पष्ट पारेको छ । नेपाल विश्वभरिका मूलकमध्ये भौगोलिक र समाजिकरूपमा विविध रहेको हुँदा यहाँ विभिन्न सभ्यताहरूको आफ्नै पहिचान र इतिहास सहजै देख्न सकिन्छ । आज प्रदेश नम्बर २ भित्र नामाङ्कनको विषयले यसै विषयलाई कमजोर र निरर्थक बनाएको देखिन थालेको छ ।
इतिहास साक्षी छ, तराई को उर्वर भू-भाग माता सीताको भूमिका रूपमा विश्वविख्यात् रहेको छ भने हाम्रो सभ्यताले मिथिला र मैथिलको अनेकौं गौरव गाथाबारे चित्रण गर्छ । आज प्रदेश नामाङ्कनको विषय यिनै गौरवशाली विषय वस्तुलाई पछि छाडेर हिँडेको देखिँदैछ ।
राजनीतिक शक्ति परिवर्तनकारी र गतिशील हुन नसक्दा तराईवासीको पहिचान धमिलो भएर मधेश शब्दमा सीमित भएको छ । मधेश र मधेशी शब्द लादिएको एक राजनीतिक प्रहार हो भन्ने कुरा आमसर्वसाधारणले बुझ्न सकेका छैनन्
राजनीतिक शक्ति परिवर्तनकारी र गतिशील हुन नसक्दा तराईवासीको पहिचान धमिलो भएर मधेश शब्दमा सीमित भएको छ । मधेश र मधेशी शब्द लादिएको एक राजनीतिक प्रहार हो भन्ने कुरा बुझ्न नसकेका आम सर्वसाधारणमा राजनीतिक दलले राज्य सत्तासम्म पुग्न यस मधेश शब्दलाई पहिचान दिने खेल अघि सारेको देखिन्छ ।
राजनीतिक संयत्रको राष्ट्र र राज्य विकसित बनाउन विकास सँगसँगै सभ्यता र पहिचानलाई संरक्षण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ तर दुर्भाग्यपूर्ण ढंगले प्रदेश नम्बर २ का नेताहरू यस विषयमा सत्ताकेन्द्रित भए र यसले हाम्रो पहिचान एवं सभ्यतालाई नै धमिलो बनाउने काम गर्‍यो ।
प्रदेशको पहिचान मधेश र मधेशीसम्म मात्रै सीमित पार्ने खेलमा प्रथम स्थानमा बसेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले यस माध्यमबाट राजनीतिक फाइदा लिन खोजेका छन् भने अन्य राजनीतिक दलमा सभ्यताप्रतिको प्रेम कम झल्किन्छ र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीको विरोध गर्नैपर्ने बाध्यता बढी । प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयले आज राजनीतिक दलहरू बाहेक कुनै औचित्यलाई समर्थन गरेको देखिन्न ।
देशभित्र तथा बाहिरबाट सञ्चालित विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले यस विषयलाई थप कमजोर बनाएका छन् । पश्चिमा शक्तिकेन्द्रहरू नेपालको पहिचान र राजनीति कमजोर पार्ने खेलमा गैरसरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट लागि परेका छन् । प्रदेश नम्बर दुईभित्र यिनै पश्चिमा शक्तिशाली मुलुकका धेरै राजनीतिक दलालहरू सक्रिय भएर बसेका छन् जसको उद्देश्य नै हाम्रो सभ्यतामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहने छ ।
यसरी कमजोर पारिएको हाम्रो पहिचानलाई ध्वस्त बनाउने अन्तिम स्वरूप नै हो मधेश शब्दको वास्तविक रूप ।
मधेश शब्दको उत्पति कहिले भयो र यो शब्दको प्रयोग पहिलोपटक कसले गर्‍यो भन्ने कुरामा हामी अझै स्पष्ट छैनौं । २०६२/६३ को आनदोलनले मधेशको प्रसङ्गलाई राजनीतिक औचित्य दिए पनि यसको प्रयोग भने पहाडतिर तराई भेगका श्रमजीवीलाई अङ्कित गरेर निकै पहिलेदेखि भएको बुझिन्छ । यो शब्दले यसैकारण न त हाम्रो पहिचानलाई नै दर्शाउँछ, न त हाम्रो सभ्यतालाई नै ।
प्रदेश नम्बर २ को आफ्नै वास्तविक पहिचान र मौलिकता छ, तर आज केही वर्गको राजनीतिक स्वार्थले हाम्रो वास्तविक पहिचान हराएको देखिन्छ । मिथिला, अवध, भोजपूरा लगायत सभ्यताको आफ्नै गरिमामय इतिहास, पहिचान, कला-संस्कृति, रंग, रूप र परिवेश हुँदाहुँदै आज हामीलाई मधेशी भनेर मात्रै चिनाउने प्रयास हुँदैछ । प्रदेश सरकारको कमजोर नेतृत्वले यस विषयलाई थप प्रचार–प्रसार गरेर हाम्रो पहिचान सिध्याउने निकै ठूलो षड्यन्त्र हुँदैछ ।
आज प्रदेशभित्र सत्तारुढ दलहरूको क्रियाकलाप हेर्दा पहिचानको नाममा राजनीतिक व्यापार भइरहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ । मधेशवादी शीर्ष राजनीतिक नेताहरू जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न सिपालु रहेको अनेकौं प्रमाण छन् जसमध्ये समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव केन्द्रीय सरकारको उप-प्रधानमन्त्री पनि छन् । मौसमझैँ परिवर्तन हुने नेता उपेन्द्र यादवको चरित्र प्रदेशको पहिचान र नामबारे स्पष्ट रहेको छ ।
पश्चिमा शक्तिकेन्द्र नेपालको पहिचान र राजनीति कमजोर पार्ने खेलमा गैरसरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट लागि परेका छन्
प्रदेशभित्र जातीय राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिने उपेन्द्रले मधेशको जल्दोबल्दो मुद्दा कहिले सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । मधेश शब्दले नै आफ्नो राजनीतिक पसल चलाएका उनी प्रदेशको पहिचान मधेश नामाङ्कनले धमिलो बनाउन लागि परेका छन् । यता मधेशको राजनीतिमा सक्रिय राजपा नेपालका शीर्ष नेताहरू पनि यस विषयमा उपेन्द्र यादवसँग एक मत राख्छन् ।
सर्वसाधारणमा मधेशको नामले लोकप्रियता समेत कमाएका यी राजनीतिक दलहरू जनता झुक्याउन सफल रहेपनि भित्री राजनीति प्रदेशभित्र अझै जातीय विभाजनमै सीमित छ ।
प्रदेशको गौरवशाली सभ्यता सिध्याउन छिमेकी मुलुक भारतले पनि राजनीतिक दलहरूलाई विभिन्न किसिमका प्रलोभन र सुविधा दिँदै आएको छ ।
भारतको यस विषयमा मधेशवादी शक्तिलाई समर्थन गर्ने दुई महत्त्वपूर्ण कारण देखिन्छ ।
एकातिर मधेशभित्र आफ्नो समर्थक उभ्याएर राष्ट्रिय राजनीतिमा बार्गेन गर्ने र अर्कोतर्फ मिथिला लगायतका सम्पूर्ण ऐतिहासिक सभ्यताहरू आफ्नै रहेको दाबी गर्ने भारतको मुख्य योजना रहेको बुझिन्छ । प्रदेशको मौलिकता र सभ्यता जोगाउने हो भने आउने दिनमा प्रदेशभित्र एक सकारात्मक बहस चलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
राजनीतिक निकास सहज नरहेकाले नागरिक समाज र वौद्धिक वर्गले गौरवशाली इतिहासको रक्षा गर्न बौद्धिक बहसको शुरूवात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वाइडबडी विमान रित्तैजस्तै उड्छ जापान, कहिले कतियात्रु बोकेर उड्यो ? काठमाडौं - सुन्दा गर्वै लाग्छ- नेपाल एयरलाइन्स सीधै जापान उड्न थालेको छ। यसको व्यापारिक हालत भने पीडादायी छ। अर्थात्, वाइडबडी विमान रित्तैजस्तै जान्छ, रित्तैजस्तै आउँछ। अगस्ट २९ यता काठमाड...